Budata Kill the bug APK maka Android
Budata Kill the bug
Free Budata maka Android (37.00 MB)
Budata Kill the bug,
Igbu bug ahụhụ bụ akụkọ egwuregwu ịme egwuregwu na ị nwere ike igwu na ngwaọrụ gị na sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Ijiji mgbe niile nwetara na akwara anyị noge ụfọdụ na ndụ anyị. Site nolu ha na mgbe nile ha na-efedata, ha akpasuwo anyị niile iwe. Ọzọkwa, nihi na ha bụ ndị na-agba ọbara, ha na-ahapụ ọnyá nke ga-ebute itching. Nọnọdụ ndị dị otú a, anyị na-achọ ihe ngwọta iji kpochapụ ha.
Na egwuregwu a, ha gamiri otu nime ihe ngwọta ndị ahụ site nime ka ọ bụrụ ihe ọchị. Ka anyị ghara ichefu na nke a bụ naanị egwuregwu. Anyị na-atụba bọọlụ anyị mepụtara site na ịbelata akwụkwọ ahụ na anwụnta. I nwere otutu 3 tufuwa. You ga-agbapụ anwụnta 3. Ọ bụrụ na ị kụrụ, ị ga-atụfu egwuregwu ahụ. Nụlọ, na kichin, nọfịs, na klaasị ma ọ bụ na cafe ... Egwuregwu miri emi na-enye gị ohere igwu egwu nọtụtụ ebe na njem na-aga nihu nadaghị nwayọ.
Ekwenyesiri m ike na ị ga-achịkwa ya ka ị na-egwu egwu, ọbụlagodi na ị na-alụ ọgụ na ọkwa mbụ. Nwere ike ịghọ onye mmeri dịka ọkpụkpọ kacha mma. Anọ m ebe a na egwuregwu na-atọ ụtọ ị gaghị achọ itinye. Ọ bụrụ nịchọrọ ịbụ onye mmekọ na njem a, ịnwere ike ibudata egwuregwu ahụ nefu na ngwaọrụ mkpanaka gị.
Kill the bug Ụdịdị
Nha faịlụ: 37.00 MB